I-Golfer Bobby Jones I-Biographie kunye neenkcukacha zengqesho
UBobby Jones ungomnye wamagorha emlandweni wegalufa. Nguye kuphela u-golfer obizwa ngokuba yi-Grand Slam yonyaka omnye, owayengumdlali obalaseleyo wee-1920s, kwaye wabambisana ngokusekwa u-Augusta National Golf Club kunye noMasters.
Umhla wokuzalwa: uMatshi 17, 1902
Indawo yokuzalwa: Atlanta, Ga.
Umhla wokufa: Ngomhla wama-18, 1971
Igama lomnxeba : UBobby uyisiteketiso; Igama lakhe elipheleleyo nguRobert Tire Jones Jr.
Izakhono: 7 (uJonard unomncintiswano njengomtsalane kuzo zonke ezi ntlawulo)
1926 eBritish Open
1927 eBritish Open
1930 iBritish Open
US amateur: 1924, 1925, 1927, 1928, 1930
I-Amateur yaseBrithani: 1930
Ezinye iimpumelelo ezibalulekileyo nguJones ziquka i-1916 yase-Georgia Amateur, i-Amateur yaseMerika ngo-1917, 1918, ngo-1920 no-1922, ngowe-1927 wase-Southern Open ne-1930-mpuma we-Southeast-Open.
Amabhaso kunye neNhlonipho kaBobby Jones
Ebizwa kwiqela le-US Walker Cup (1922, 1924, 1926, 1928, 1930)
I-Captain, iqela le-US Walker Cup, ngowe-1928, ngo-1930
I-award ye-USGA yonyaka wezemidlalo kuthiwa nguBobby Jones Award
UJonas wayefaniswa kwisitampu se-US esithunyelwe ngo-1981
UBobby Jones: "Imfihlelo yegalufini ifuna ukujika izihlunu ezintathu zibe zibini."
UBobby Jones: "Igalofu yezokhuphiswano idlala ngokukodwa kwi-course yesihlanu neyesigamitha, isikhala phakathi kweendlebe zakho."
Umlobi uHerbert Warren Umoya: "Ngokombono wabantu abaninzi, kubo bonke abadlali ababalaseleyo, uJonas wafika ekufuphi ukuba yinto esiyibiza ngokuba yindoda enkulu."
UFrancis Ouimet : "Umdlalo onxamnye noBobby Jones unjengokungathi unesandla sakho esibanjwe kwi-saw buzz. . "
Okunye Bobby Jones Quotes
I-putter ethi uBobby Jones wasebenzisa kulo lonke umsebenzi wakhe wayebizwa ngegama elithi "Inhlekelele uJane."
Xa uJon Jones wayinqoba i-US US Open 1926 e-Scioto Country Club e-Ohio, omnye wabalandeli abamlandela babeneminyaka engu-13 ubudala uCharlie Nicklaus, uyise kaJack Nicklaus. UJack waqala ukudibana noJones ngo-1955 wase-Amateur wase-US. Kwaye ngo-1959 wase-US Amateur, eyawunqoba uNicklaus, wamnqoba unyana kaJones, uBob Jones III, kwinqanaba lokuqala.
Ngomnyaka we-1958, isixeko saseSt. Andrews, eScotland, samzukisa uJonathan ngokumbiza ngokuthi "uFraneman weSixeko." Omnye omnye waseMerika wayehloniphekile kakhulu: uBenjamin Franklin ngo-1759.
UJohn unokwabelana ngamaxesha onke amaqhosha amane e-US Vula kwaye ubamba irekhodi ngokuphumelela ezintlanu kwi-Amateur yase-US.
Utshatshelo olukhulu lukaJones kwiimidlalo zokuphiswano zakhe ezintandathu e-US naseBrithani zi-7-no-6.
Ngomnyaka we-2004 ochazwe kuthiwa (uthenge kwi-Amazon), uJones wayebonakaliswe ngumdlali weqonga uJim Caviezel.
Biography kaBobby Jones
Ingxabano inokwenziwa ukuba uBobby Jones ungowona golfer owake waphila. Kodwa akukho nto inokuqiniseka ukuba uYona nguyeyona nto ininzi yexesha elide elihlala kuyo. Ngenxa yokuba uJones udlala kuphela igorfu lokukhuphisana malunga neenyanga ezintathu zonyaka, ehamba kwii-tournaments ezinkulu kwihlobo.
UJones wazalelwa kwintsapho enokwenene e-Atlanta. Kodwa wayekho, ngo-bobbyjones.com, "umntwana onjalo ogulayo kangangokuthi wayengenakudla ukutya okuqinileyo de wayeneminyaka emihlanu ubudala."
Intsapho ithenge indlu kwi-Atlanta yase-East Lake Country Club kwaye impilo kaJones yaphucula njengoko yafika kwimidlalo, kuquka igalufa. UJonas akazange abe nezifundo ezisemthethweni, kodwa waqala ukuguqula ngokufunda i-East Lake pro.
Waqala ukuphumelela iikhomphambaneminyaka engama-6 ubudala, kwaye ngo-14 ubudala uJona wayedlala kumaqhankqalazo kazwelonke. Umsebenzi kaJones ngamanye amaxesha uhlukaniswe ngamacandelo amabini, "i-Seven Seven Yearsan" kunye ne "Seven Seven Fat."
Iminyaka edlulileyo yayisusela kwiminyaka eyi-14 ukuya kweyesi-21, iminyaka enamafutha ukusuka kwiminyaka engama-21 kuya kwe-28. UJonard wayeyindoda, kwaye edlala kumqhudelwano welizwe esemncinci, udumo lwakhe lukhula. Sekunjalo akazange athole nantoni na ebalulekileyo. Ngo- 1921 iBritish Open , ekhungathekile ngomdlalo wakhe, wathabatha ibhola yakhe waza wahamba esikolweni. Ulaka lwakhe lwaluyaziwa kwaye kwakukho iziganeko ezininzi zokugxotha ibhola.
Kodwa xa uJonas ekugqibeleni wahlula ngo-1923 i-US Open, "i-fat years" yaqala.
Ukususela ngo-1923 ukuya ku-1930, uJonathan wadlala kumaqhawe angama-21 ... kwaye wawafumana ama-13 kuwo. Ubumnandi bakhe bafika ngo-1930 xa wayinqoba i- Grand Slam yexesha: i-US Open, i-US Amateur, iBritish Open ne- British Amateur yonke loo nyaka.
Kwaye, xa eneminyaka engama-28 ubudala, uJonas washiya umhlala-phantsi kwi-galufu yokukhuphisana, ukhathele ukugaya kunye nengqondo yomzimba.
Uncedise ukucwangcisa i-clubs edibeneyo yokuqala. Wayeqhuba umthetho. Waqulunqa i- Agusta kaZwelonke kunye noMasters Tournament .
Ngowe-1948 uJones wafumanisa ukuba unesifo esinqabileyo senkqubo yesantya kwaye akazange adlale igalofu kwakhona. Wachitha ixesha elide leminyaka yakhe esesitulo sabakhubazekile, kodwa waqhubeka nokusingatha iMasters. Wafa ngo-1971 eneminyaka eyi-69.
UBobby Jones wayephakathi kweklasi yokuqala ye-inductees kwi- World Golf Hall of Fame ngowe-1974.
Ngowe-1930: Isiqhamo se-Grand Slam
Igama elithi "grand slam" namhlanje lithetha, ukuya kubadlali begalufu, ukuphumelela ezine ezinezikhundla zobugcisa - i-US Open, i-British Open, iMasters kunye ne-PGA Championship - ngexesha elifanayo. Ngo-1930, i-Masters yayingekabikho. Kwaye uJones, umtsalane, wayengakufanelekanga ukudlala i-PGA Championship. Igama elithi "grand slam" alizange lisekho.
Kodwa iinqwelo ezine ezinkulu zegalufa zaziyizintlonelo zombini ezivulekileyo zelizwe kunye nobuncoma bobuzwe bomhlaba bobabini, kwaye uJones waphumelela zonke ezine. Omnye umbhali wezemidlalo wayibiza ngokuthi "i-quadrilateral engenakulinganiswa," kodwa namhlanje siyazi oku njengona yodwa yonyaka we-grand slam kwimbali yegalufa.
UJon Jones wawuthatha iikhomphamne ezine kule ndlela:
I-Amateur yaseBrithani, i-Old Course eSt. Andrews, ngoMeyi 26-31 - uJones wathuma umkhosi u-Cyril Tolley kwinqanaba lesine; wabetha uRoger Wethered ekugqibeleni.
I-British Open, iRoyal Liverpool Golf Club, ngoJuni 18-20 - iphumelele ngemivimbo emibili phezu kweMacdonald Smith noLego Diegel.
I-US Open, Club ye-Interlachen Country, ngoJulayi 10-12 - iphumelele ngemivimbo emibili kuMacdonald Smith.
US Amateur, iMerion Golf Club, Septemba 22-27 - wabetha u-Eugene Homans, 8-no-7, kumdlalo weqhawe. Umdlalo wakhe osondeleyo wawunokunqoba oku-5 no-4.
I-Jones 'Golf Instructional Flims
Ngomnyaka we-1931, uJones wenza i-series ye-12 ye-movie ye-Warner Brothers. Olu chungechunge lwalubizwa ngokuba yiNdlela yeGalofu (yithenga kwi-Amazon) kwaye yadlala kwiindawo zokudlala. Kwiminyaka emininzi kamva, yaqulunqwa kwii-video nakwiiDVD. Ngomnyaka we-1932, uJonathan wenza uchungechunge lwama-6 olwaludlala kwiindawo zokudlala ezibizwa ngokuba njani Ukudiliza i-90 . Ezi zibhekwa njengevidiyo zokuqala zegalufu kwaye zijongwa namhlanje.
Ngaba AmaYuda Akholelwa KwiSono?
Ngo-1969 I-Ford Mustang yeProjekthi Yonyaka Yengxelo
Iimpawu zeKrisimesi zaseNtaliyane